प्रचण्ड ,माधव-झलनाथको एकता , प्रचण्ड एकल अध्यक्ष ! यस्तो हुनेभयो ठूलो कम्नियुष्ट पार्टी , - News20 Media
May 27, 2021 May 27, 2021 N20LeaveaComment on प्रचण्ड ,माधव-झलनाथको एकता , प्रचण्ड एकल अध्यक्ष ! यस्तो हुनेभयो ठूलो कम्नियुष्ट पार्टी ,
काठमाडौँ । पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले दल खोल्ने तयारी गरेका छन् । सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध परेको रिटको छि’नोफा’नोलाई हेर्ने या अगाडि बढ्ने भन्नेबारे उनले निकटस्थसँग परामर्श गरिरहेको बुझिएको छ । कतिपयले अहिले नै बढ्नुपर्ने त कतिपयले सर्वोच्चको फैसलापछि बढ्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।
आफैले सुरुमा दल खोल्ने र त्यसपछि प्रचण्डसँग एकता गरी नयाँ नाम जुराएर जाने तयारी समेत भएको छ । मंसिरमा चुनाव होस् या नहोस् प्रचण्ड र माधव नेपाल मिलेर नयाँ कम्युनिस्ट शक्ति निर्माणको आन्तरिक सहमति बनिसकेको छ ।
११ जेठमा माधव नेपालले कम्युनिस्ट पार्टी पुर्नजागरणको अपिल गरेका छन् । उनले घुमाउरो तरिकाले नयाँ दल खोल्ने आशयसहित गो’लब’न्द हुन समेत भने । नेपालले वृहत कम्युनिस्ट पार्टी गठनको संकेत गरेका छन् । अब त्यो पार्टी नै माओवादी केन्द्रसँग मिलेर नयाँ दल निर्माण हुने देखिएको छ ।
ओली सरकारले वृद्धवृद्धा भत्ता ५ हजार पु–याउने, यस्तो छ तयारी
माधव नेपालको नयाँ पार्टीमा बामदेव पनि आए, यस्तो बन्यो नयाँ पार्टी